ရချင်ရင် ပေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရချင်ရင် ပေးပါ
Posted by ခင်ခ on Oct 24, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
မပေးဘဲ မရချင်ပါနဲ့။ ကိုယ်ကရချင်ရင် ကိုယ်ကအရင် ပေးပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးရတယ်ဆုိုတဲ့ စကားက ပေးရင် ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ရလာတဲ့ အခါမှာလည်း ကုိုယ်ပေးလုိုက်တဲ့ အရာနဲ့တန်အောင်တော့ ပြန်ရကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေးခြင်းဟာ ပစ္စည်း ဥစ္စာပေး ခြင်းမျိုးကိုပဲ ဆိုလုိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ဝတ္ထု အသွင်အပြင် စိတ်နေစိတ်ထား အနေအထား အားလုံးနဲ့ သက်ဆုိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကား ကုိုယ်ဘာလုိုချင်လဲဆုိုတာ ကိုယ်ကုိုယ်တုိုင် ရွေးချယ်ပြီး ကုိုယ်က အပြုံးလုိုချင်ရင် ကုိုယ်ကအရင် ပြုံးပြရမှာဖြစ်သလုို ကုိုယ်က အကောင်းကြားချင်ရင်လည်း ကုိုယ်ကအရင် အကောင်းပြောပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုိုပဲ ကုိုယ့်ကုို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံစေချင်ရင် ကုိုယ်ကအရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုမူနေ ထုိုင် ဆက်ဆံပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ… အဲဒီလို ကိုယ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကမကောင်းဘူးဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ သူ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းဟာ သူ့အကျိုးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အကျိုးဟာ ကုိုယ့်အဆုိုးမဖြစ်ဖုို့ ကုိုယ်ကောင်းအောင် ကိုယ်လုပ်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကုိုယ်ကောင်းချင်ရင် ကုိုယ်ပြောင်းပြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကုိုယ်ကောင်း ပြရင်လည်း ကုိုယ်ကောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းတွေကုို ရချင်ရင် ကုိုယ်ကအရင် အကောင်းပေး နုိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ စေတနာနဲ့ပေးရင် ပေးတာနဲ့အမျှ ရနေကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးပြခဲ့သလို ကိုယ်ကရချင်ရင် ကိုယ်ကအရင်ပေး ရမယ်ဆိုတော့ တစ်ချို့ကပြောကြလိမ့်မယ်၊ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတာလားတဲ့၊ ဒါဟာမပေးချင်ကြတဲ့သူ အတ္တကြီးသူတွေရဲ့ စကားလို့ဘဲ ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လည်းဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ရအောင် နည်းနည်းတွေးမိတာလေးတွေ ရေးကြည့်မယ်နော်။
မိဘနဲ့သားသမီး အပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်၊ ကိုယ်ရင်သွေးလေးတစ်ယောက်လူလောကကိုရောက်လာ တယ်ဆိုထဲက သဲသဲလှုပ်ပြီး မိဘများပြုစုယုယခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့သားသမီးလေးတွေ စကားလေးမပီတကာပြော တတ်ချိန်၊ လမ်းလေးစမ်းလို့လျောက်ချိန်မှာ သားရေ သမီးရေလို့ အဖေဖြစ်ဖြစ် အမေဖြစ်ဖြစ် ခေါ်လို့ရှိရင် အဲဒီကလေးဘယ်လိုလဲ လေ့လာကြည့်ပါ ခေါ်လိုက်တဲ့အဖေ၊ အမေဆီဆီကို လာလေ့ရှိမှာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ တစ်ချို့မိသားစုအိမ်တွေမှာ အဖေက အဝေးမှာရောက်နေလို့ အမေကလည်း အလုပ်တွေနဲ့မအားလပ်တော့ ကလေးမွေးဖွားပြီးကထဲက အိမ်မှာအချိန်များစွာရှိနေတဲ့ အဒေါ်ကထိန်းရ ကလေးကိစ္စတွေအတော်များများ သူဘဲလုပ်ပေးရပြီး ကလေးနဲ့အနေနီးခဲ့ ပြုစုယုယခဲ့တာမျိုးမှာ ကလေးရဲ့ အဖေနဲ့အမေက သားရေ သမီးရေ အဖေ့ဆီလာပါအုံး အမေ့ဆီလာပါအုံး ခေါ်လိုက်ချိန်မှဘဲ ခုနကလေးရဲ့အဒေါ်ကလည်း သားရေ သမီးရေလို့ တစ်ပြိုင်တည်းခေါ်ကြည့်ပါ ကလေးကဘယ်ကိုသွားဖြစ်မလဲ များသောအားဖြင့် အဒေါ်ဆီကို သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဘာကိုပြတာလဲ ယုယကြင်နာမှု့မေတ္တာကို မိဘတွေထက် အဒေါ်ကပေးခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်အရင် ပေးခဲ့ရတဲ့ ယုယကြင်နာမှု့မေတ္တာရဲ့ တုန့်ပြန်မှု့ဘဲ မဟုတ်ဘူးလာခင်ဗျ။
အလွန်ကိုချစ်ကြိုက်နေတဲ့ မိန်ကလေးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ကဂရုစိုက်မှု့တွေ ကိုယ်ချစ်နေကြောင်းအခြေအနေ တွေကို မိမိချစ်တဲ့မိန်းကလေးကို သိအောင်ပြုလုပ်မပေးဘဲနဲ့ အဲဒီမိန်းကလေးဆီက အချစ်ကိုပြန်ရဖို့ မနီးစပ် နိုင်သလို၊ ကိုယ်ကအရင် စိတ်ဝင်စားနေ ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်းလေးကို ကိုယ်စိတ်ဝင်စား ကြိုက်နေတဲ့ အကြောင်းသိအောင် မလုပ်ဘဲနေမယ်ဆိုရင်လည်း နီးစပ်နိုင်ပါအုံးမလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မေတ္တာမျှလို့ အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်လက်ခံကာ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှာ လည်း ကိုယ်က သူ့အပေါ် ကြင်နာမှု့တွေ ဂရုပြုဆောင်ရွက်ပေးမှု့တွေ ကူညီကာလက်တွဲလုပ်ဆောင်မှု့တွေ ပေးဖြစ်နေဖြစ်ခဲ့ရင် အလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ အိမ်ထောင်လေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တွက်ကပ်နေမယ်၊ အမျိုးသားလုပ်ရမယ့်အလုပ် အမျိုးသမီးလုပ်ရမယ့်အလုပ် ငါ့တော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး မင်းဖာသာမင်းရအောင်လုပ်လို့ ပေးသင့်တဲ့ အကြင်နာတွေ ဖေးမမှု့တွေ မပြုပေးနေကြည့်ပါလား သာယာဖွယ် အိမ်ထောင် မိသားစုလေး ဖြစ်ပါ့မလားလို့။
အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေအပိုင်းမှာလည်း လေ့လာကြည့်ပါ ကိုယ်ကတော့ သူများအကူအညီ လိုတဲ့အခါ ကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာတောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ လွဲရှောင်နေမယ့်၊ ကိုယ့် အခက်အခဲကြုံတော့မှာ သူငယ်ချင်းတို့ရေ မိတ်ဆွေတို့ရေ လုပ်ကြပါအုံး ကူညီကြပါအုံးဆိုလို တဖက်က စိတ်ထားပြည့်ဝပြီး သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေစိတ်အရ ကူညီလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ခါကနှစ်ခါ အဲလို အကြိမ်တွေများလာတဲ့အခါ တဖက်သူကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုးက အားနာမှု့တွေ၊ ရှက်ရွံမှု့တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဘဲ ကိုယ့်ကိုခင်မင်လို့တွေ့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ တွေ့ပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းလာတဲ့ မိတ်ဆွေ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို မတွေ့ချင်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကိုလက်ဆွဲနုတ်ဆက်ပြီး ခဏတာ လေးအချိန်တောင် တွေ့ဆုံဖို့အချိန်မပေးဘဲ ငြင်းကြည့်ပါလား၊ အဲလိုငြင်းတာ အကြိမ်ကြိမ်တာဖြစ်ခဲ့ရင် တဖက် ကတွေ့ချင်တဲ့သူကလည်း နောင်များတွေ့ဖို့ကိစ္စပေါ်ခဲ့ရင်တောင် မယုံရဲတော့ ဘာပြောမလဲ“ချိန်းမနေပါနဲ့၊ ချိန်း လည်း တွေ့ဖြစ်မှာမှမဟုတ်တာ´´လို့ဘဲ တွေ့ဆုံဖို့အလေးအနက်မထား ဖြစ်တော့မည့်အခြေအနေလေး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်တာပါလေ။ အဲဒီမှာတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ အဲလိုကို မရင်းနှီးချင်လို့ မတွေ့ဆုံချင်လို့ဆိုရင် တော့ဒီနည်းဗျူဟာကလည်း ဥပါယ်တမျဉ်ပါဘဲလေ။ ဒါကလည်း ဆက်ဆံမှု့ကို မလိုလားမနှစ်သက်လို့ ဝေး သွားစေအောင် ကိုယ်ကပေးလိုက်တဲ့ ပေးခြင်းတစ်ခုပါဘဲလေ။
တရားဘာဝနာဘက်ကိုဘဲကြည့်အုံးမလား ကိုယ်တိုင်တရားမထိုင်ဘဲနဲ့တော့ သမာဓိဆိုတဲ့ စိတ်တွေဖြစ်မလာ သလို၊ ကောင်းမှု့မပြုဘဲနဲ့လည်း ကုသိုလ်ဆိုတာ မရနိုင်ပါဘူးလေ။
ဒီလိုပါဘဲ ဂဇက်ရွာမှာလည်း မိမိပိုစ့်ရေးမတင်ဘဲနဲ့တော့ မိမိအတွက်ကွန်မန့်ရနိုင်စရာ မရှိဘူးလေ။
ဆိုလိုချင်တာကတော့ မပေးဘဲရချင်လို့တော့ အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ကောင်းသည်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးသည်ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုပေးခြင်းရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ အရာ၊ စွမ်းဆောင်မှု့ နဲ့အတူ ကိုယ်ထား ခဲ့တဲ့ စိတ်အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ခုခုတော့ ရပါလိမ့်မယ်လို့ တွေးမိတွေးတာကို ရေးမိရေးတာပါ။
မှန်ပါတယ် ကိုခင်ခရေ ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ် လောကကြီးမှာ
ဦးဆုံးမန့်ပေးသူ jullies cezer ရေ ကျေးဇူးပါနော်။ တွေးမိတာလေးတွေကို ရေးလိုက်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် အယူအဆ ကွဲပြားမှု့တွေလည်းရှိမှာပါဗျာ။
အဲဒီစိတ်ကလေးကို လက်ကိုင်ထားထားပေမယ့် ကိုယ်ကအများကြီးပေးရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ပေးတာကို မသိတဲ့လူ တွေနဲ့တွေ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် …….
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ မမခိုင်ရေ၊ တစ်ခါတလေ ကိုယ်စိတ်ကောင်းထားပြီး ပေးခဲ့တဲ့ အရာအတွက်၊ အဲဒီပေးတဲ့သူဆီက ပြန်ရချင်မှရနိုင်ပေမယ့်၊ အခြားတစ်ယောက်ဆီက ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ကောင်းထားခံ ရတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ စေတနာသည် ရောင်ပြန်ဟပ်ပါ၏။
ဟုတ်တယ်ဗျို့။ ကိုခင်ခ အတွေးကို ထောက်ခံမိပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ပေးသလောက်ပြန်မရဘူး ဆိုပြီးလည်း တွေးမိတတ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ သတိမထားမိတာက “ကိုယ်ပေးသလောက်က ပြန်ရပါတယ်။ ပေးခဲ့တဲ့ လူဆီက ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့လေ”။
သံသရာမှာက ရှိသမျှ အကြွေးအကုန်ဆပ်ရမှာလေနော့။
အပေးချည်းပဲ မရှိသလို ကိုယ်ကချည်းယူလို့လည်းမရဘူးလေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲသတိပေးရတယ်။
နို့မို့ စိတ်နာစရာတွေ တွေ့လွန်းလို့။
ကျနော် မန့် မလို့ ဘဲ…ဘာမန့် ရမှန်းမသိလို့ …..အကြာကြီးထိုင်စောင့်နေတာ….
…..တခါတခါကိုယ်က ရပါစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တော့မဟုတ်ဘူးဗျ…..
အေးလေ…ဘာဘဲပြောပြောကိုပျော်ရွှင်မှုရတာလည်း..ကိုယ်က အချိန်တွေ ကိုယ့် အသိသညာတွေ ပေးဆပ်လို့ ဘဲပြောရမှာပေါ့
ဒီ အမှန် (၃)ခု ပေါင်းရမယ်။ သူများ အတွက်သာ တောင့်တ နိုင်တာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့် အတွက် လည်း လိုရာကို တောင့်တ နိုင်ပါတယ်။ လောဘနဲ့ တောင့်တ လို့တော့ မရနိုင် ပါဘူး။
မိဘနဲ့သားသမီးအပိုင်းကတော့ ကျမတို့အတွက် တကယ်လက်တွေ့ကျကျ မှန်ကန်နေပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ဖေဖေက သားသမီးအပေါ်အလွန်ကြင်နာယုယတတ်တော့ ညီမတစ်ယောက် ၂ နှစ်ခွဲအရွယ်မြို့မှာဆေးရုံတက်ရတော့ ဆေးရုံမှာဖေဖေနဲ့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ပဲနေရပါတယ်။ မေမေကတော့ ရွာကအိမ်မှာ ကျန်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ဈေးဆိုင်အလုပ်နဲ့ပေါ့ လယ်ယာကိစ္စတွေတော့ ပစ်ထားရတာပေါ့။ အဲဒီ၂နှစ်ခွဲကလေးငယ်က မိခင်နဲ့ခွဲပြီးနေရပေမယ့် မိခင်ကိုတမ်းတပြီး ငိုတာမျိုးမရှိဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့အတွက် ဖခင်လက်ဟာ မိခင်လက်နဲ့ မကွာလို့ပါပဲ။ ဒါဟာ ဖေဖေက သူ့ရဲ့သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေးလို့ပါပဲ။ အလွန်ပဲအနွံအတာခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့မိသားစုက အလွန်သာယာအေးချမ်းပျော်ရွှင်မှုရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် မိခင်လက်ကသာတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ မိသားစုအေးချမ်းသာယာပျော်ရွှင်ဖို့ မိခင်ရဲ့မေတ္တာ ကြင်နာမှုတွေအပြင် ဖခင်ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ကြင်နာယုယမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေး ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ပြောချင်တာလေးပြောလိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားတယ်။
တစ်ခုကျန်သွားလို့ အများအားဖြင့်မိခင်လက်ကသာတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ ဖခင်က မိခင်ကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ကြင်နာယုယမှုပေးခြင်း နည်းလို့လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖခင်က သားသမီးတွေရဲ့ ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းကို မခင်လောက်မရရှိကြဘူးထင်ပါတယ်။
မျှတသူကတော့ ပေးတာနဲ့ရတာ ညီအောင်နေပါသတဲ့
လျော့နည်းသူကတော့ မပေးဘဲ ယူချင်တတ်ပါသတဲ့
ဆိုကြ ပြောကြလေ့ရှိတဲ့“သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”
“ဘယ်သူကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း၊ မိမိကောင်းမည်”
အဲ… အဲဒီလို ကိုယ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကမကောင်းဘူးဆုိုရင်တော့ ဒါဟာ သူ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းဟာ သူ့အကျိုးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အကျိုးဟာ ကုိုယ့်အဆုိုးမဖြစ်ဖုို့ ကုိုယ်ကောင်းအောင် ကိုယ်လုပ်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေးအယူရှိနေသမျှ ဘယ်အရာမဆို စိတ်ကို ပင်ပန်းစေပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ကမ်းလင့်ပေးတဲ့ လက်တွေကသာ လောကမှာ စိတ်အချမ်းသာဆုံးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဥပမာ မာသာထရီဆာလို ဘွားဦးဇွန်းလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့ ။
ဒီပို့ (စ)မှာ တွေးစရာ မှတ်သားစရာ တွေ များပါတယ် ။ ကိုခင်ခ ပြောခဲ့တဲ့ အရင် ပို့ ( စ ) က give နဲ့ care ကိုတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော် စွဲ သွားတယ် ။ ကျွန်တော် က ရတဲ့ အချိန်မှာ ပို့ ( စ ) တွေ မန့် တွေ အကုန် ဖတ်နိုင်ဖို့ နဲ့ စိတ်ထဲ ရှိနေတဲ့ အရာတွေကို ရေးဖို့ အားသန်နေတော့ ခု တလော မမန့် ဖြစ်ဘူးဗျ !
အဲဒီဆုတောင်းလေးကိုရော၊ အဲဒီဆုတောင်းနိုင်လောက်တဲ့သူကိုရော လေးစားမိပါရဲ့။
တစ်ခါက ပိုင်းလော့ဆရာတော်ရဲ့ ကျောင်းကို တရားနာသွားတော့ ဆရာတော့် ဝေယျာဝစ္စတွေရဲ့ တီရှပ်တွေမှာ အပေးနဲ့ပျော်သူများ လို့ရိုက်ထားတာတွေ့ရလို့ သိပ်ကိုသဘောကျမိတာပါပဲ။
မခိုင်ဇာဝင်းရေ စိတ်ထားကောင်းနဲ့တာ ပေးကြည့်ပါ ပြန်ရပါတယ် ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလေ၊
အကြာကြီးထိုင်စောင့်ပြီး တော်ပြီမမန့်တော့ဘူးလို့မလုပ်ဘဲ မန့်ခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရေ ကျေးဇူးဗျာ။
ပြောချင်တာပြောပြီး ကျေနပ်သွားသူ ပန်းစပယ်ရေ ဖခင်ရဲ့ကြင်နာမှု့ပေးပုံလေးကို
ပေါ်လွင်အောင်ရေးပေးသွားတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ပိုစ့်နဲ့လည်း ကိုက်ညီသမို့ ဆိုင်ပါတယ်ဗျ။
ကိုပေါက်ရေ မျှတသူကတော့ ပေးတာနဲ့ရတာ ညီအောင်နေပါသတဲ ဆိုတဲ့အရေးတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆို လက်မခံချင်ဘူးဗျ၊ ကိုယ်ပေးသလောက်သူဆီကဘာရမလဲ ပေးတာ၊ ရတာတူမှ ပေးတတ်တဲ့ တွက်ကပ်သူလို့ဘဲ ယူဆသဗျ။ အဲလို ရမှပေးချင်သူတွေကြောင့် ဒီပိုစ့်လေးပါ အချက်လေးတွေ တွေးမိရင်းရေးမိတာပါလေ။
“ဘယ်သူကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း၊ မိမိကောင်းမည်” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့
မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ကမ်းလင့်ပေးတဲ့ လက်တွေကသာ လောကမှာ စိတ်အချမ်းသာဆုံး ဆိုတာ အမှန်ဘဲ မမယ်ပုရေ။ ပရဟိတအမှန်အစစ် စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေမှာ အများဆုံးတွေ့တတ်ပြီး၊ သူတို့ကျတော့ give လုပ်တာထက် care လုပ်တာလို့ဆိုလောက်ပါတယ်။
သေချာဖတ်ပြီး မှတ်တောင်ထားတဲ့ ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ ကျေးဇူးတင်သလို ၀မ်းလည်းသာမိပါတယ်၊
ဆုတောင်းလေးတစ်ခုကြားဖူးပါတယ်။ သူတပါးလိုသမျှပေးနိုင်တဲ့ သူဖြစ်ရပါလို၏တဲ့။
ဆိုတဲ့ အမပဒုမ္မာရေ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီသူကို လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဲလို ဖြစ်အောင်အရောက်သွားနိုင်ရင်ကောင်းမှာဘဲတောင် တွေးနေမိပါတယ်လေ။ အတော်တော့ ကြိုးစားရလိမ့်အုံးမယ်လို့။
ကွန်မန့်ရေးပေးကြသူ အားလုံး ခင်ခမှ ကျေးဇူးပါနော်။
အဲဒီ “ရချင်ရင် ပေးပါ” ဆိုတာလေးကို သူများတွေ ဆီက ရခဲ့တဲ့အတွေးလေး။
ကျွန်မ ခရစ်ယာန်တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာကိုတွေ့လာလဲ ဆိုရင်
Aဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က B ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကူညီလိုက်တယ် ဆိုပါတော့။
Aက B ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာထက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
Bကလဲ သူ့ကို Aက ကျေးဇူးမတင်တာ ကို အရေးမလုပ်ဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားကို နားထောင်ဖို့ အတွက် Aကို ကူညီခဲ့တာဘဲ။
ဒီတော့ A နဲ့ B ကြားမှာ ဘာမှ အပေးအယူရှိစရာမလိုဘူး။
နင်ကို ငါက ကူညီထားလို့ နင်က ငါ့ကို ပြန်ကူညီရမယ်လဲ မရှိဘူး။
B ကပြန်မကူညီ လဲ ဘာမှမတွေးဘူး။
ဒီတော့ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ နှောင်ကြိုးကင်းနေတယ်။
သူတို့ ပြန်ရမှာ ဘုရားသခင်ဆီက ဆုလာဘ်ဘဲ။
ကျွန်မတော့ အဲဒီ လောဂျစ် ကို အရမ်းကိုကြိုက်တယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ကိုယ်ကလဲ သူများကို အကူအညီ မတောင်းချင်ဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟာကို လက်လှမ်းမှီ လုပ်နိုင်တဲ့ ဘောင်ထဲမှာဘဲ ကြိုးစားနေတယ်။
သူများ အကူအညီတောင်းရင်လဲ ကိုယ်အမှန်တကယ် ကူညီပေးတာဆို ပေးမယ်။ သူ့ဆီကလဲ ပြန်ရဖို့ မတွေးဘူး။ အပြတ်ကူမယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အကူအညီ မပေးနိုင်တာကိုလဲ အားနာပြီးတော့လဲ မပေးတတ်ပါဘူး။
မဟုတ်လို့ ကိုယ့်က အနာခံပြီး သူများကို ကူညီပြီး စိတ်မှာမပြတ်ရင် အကုသိုလ်စိတ်ပိုဖြစ်တတ်လို့ပါ။
မြန်မာလို တွေးရင်တော့ အဲဒါကို ရိုင်းတယ် ခေါ်မလားဘဲ။
ဒီမှာတော့ တော်တော်များများ က ကိုယ့်စည်း နဲ့ ကိုယ်နေကြတာမို့ အချင်းချင်း ပြသနာ သိပ်မရှုပ်ဘူး ထင်တာပါဘဲ။
ကျောင်းတုန်းက အမေရိကန်စစ်စတန်လို့ ဆိုပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ရှင်းစားရင် ရိုင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ရှင်းစားတော့ ဘယ်လောက် ရိုးစင်းသလဲ။
မြန်မာ့ဓလေ့မှာ မိဘ နဲ့ သားသမီးလဲ ဒီလိုဘဲ။
မိဘတွေ က သားသမီး တွေကို ငါတို့က နင်တို့ကို ငယ်တုန်းက စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာ။
ငါတို့ အသက် ကြီးရင်ပြန်ပြီး စောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြတယ်။
မိဘကို ပြန်ပြီး အလုပ်အကျွေး မပြုတဲ့ သားသမီး ဆို လူဆိုးဖြစ်တယ်။
အနောက်တိုင်းမှာတော့ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို ငယ်တုန်းစောင့်ရှောက်တယ်။
ကြီးရင် သူတို့ဟာသူတို့ ခွဲထွက်သွား။
မိဘတွေကလဲ သူတို့ အိုချိန် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဖို့ပြင်ဆင်ထား ပြီးသား။
ဒါဟာ မိဘ တာဝန်လို့ မှတ်ပြီးထားတာမို့ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူကမှ အပြစ်တင်မနေဘူး။
သားသမီး လဲ လူဆိုးမဖြစ်ဘူး။
ဘယ်သူမှ စိတ်အနှောက်အယှက်၊ အကြိတ်အခဲ မဖြစ်ဘဲ နေနိုင်တဲ့ ဘဝ ဖြစ်ရော။
ကျွန်မကတော့ အခုချိန် သားသမီးဘဝ မှာ မိဘ ကို ထောက်ပံ့ပြီး ကျေးဇူး ပြန်ပြုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ကလေး က ကျွန်မတို့ ကို ပြန်ပြီးပြုစု ထောက်ပံ့တာကိုလဲ မလိုအောင် နေမှာပါ။
ကျွန်မတို့ ကလေးကို ပျိုးထောင်တာက ကျွန်မတို့ ပြန်ရဖို့ အတွက်မှ မဟုတ်တာဘဲလေ။
ဒါဟာ မိဘတာဝန်ဘဲ မဟုတ်လား။
သူ့ဆီက အထောက်အပံ့ကို လိုလဲမလိုချင်တာ အမှန်ပါဘဲ။
ဒါလဲ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာ နေနေလို့ လဲ ဒီစကားပြောနေနိုင်တာ ဖြစ်ပါမယ်။
အနောက်တိုင်း၊ အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့၊ အတွေးအခေါ်လေးတွေက ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားမယ် ဆိုရင် စဉ်းစားစရာလေးတွေပါ။
ကိုခင်ခ ရဲ့ အတွေး ကိုလဲ ကျွန်မ သဘောကျပါတယ်။
ရမှပေးချင်သူတွေ အတွက် စဉ်းစားစရာ လက်ဆောင်ပေါ့။
ရမှပေးချင်သူတွေ အတွက် စဉ်းစားစရာ လက်ဆောင်ပေါ့ ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးက အခုပိုစ့်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးကို ပိုပြီးလေးနက်စေပါတယ် အရီးရေ။
(ကိုပေါက်ရေ မျှတသူကတော့ ပေးတာနဲ့ရတာ ညီအောင်နေပါသတဲ ဆိုတဲ့အရေးတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆို လက်မခံချင်ဘူးဗျ၊ ကိုယ်ပေးသလောက်သူဆီကဘာရမလဲ ပေးတာ၊ ရတာတူမှ ပေးတတ်တဲ့ တွက်ကပ်သူလို့ဘဲ ယူဆသဗျ။ အဲလို ရမှပေးချင်သူတွေကြောင့် ဒီပိုစ့်လေးပါ အချက်လေးတွေ တွေးမိရင်းရေးမိတာပါလေ)
ကိုခရေ သဘောမတူတာကိုလဲ လက်ခံပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ့လောကမှာ ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေက လူအများစုဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
မပေးဘဲယူချင်သူတွေကိုဘဲ အများဆုံးတွေ့နေရလို့ လက်တွေ့ကျကျရေးပေးလိုက်တာပါ။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ဆရာတယောက်က အဆုံးအမပေးဘူးတယ်…
ကိုယ်က အရင် လက်ကမ်းပေးပါ.. တဲ့
အေးဗျာ.. ကျုပ်လဲ အဲဒါကို အမြဲကျင့်သုံးဘို့ ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်..
အဲဒီမှာ အကျိုး ၂ မျိုးရတယ်..
၁- မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို စောစောရတယ်။ (ဆိုလိုတာက လူကောင်းတွေနဲ့ မြန်မြန်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်)
၂- မိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်မယ့်လူတွေကိုလဲ စောစောသိရတယ်..
စောစောသိရတဲ့ အကျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်စေတဲ့ အချက်လေးရေးပေးလို့ ကျေးဇူးဦးပါရေ။
မနိုရဲ့ ဖြစ်ချင်စိတ်လေး ပြည့်ပါစေလို့။